Maxay Yihiin Faa'iidooyinka ay leeyihiin Maska kuwa la tuuri karo Suuqa? | Pantex
Hada wasakhowga hawada ayaa ah mid aad iyo aad u xun, isticmaaleyaal badan ayaa xirto maaskaro, maaskaro la isticmaali karo waa kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan dadka isticmaala suuqa.
1. Dareenka fudud
Maaskaro la tuuray oo loo isticmaalay in lagu sameeyo walxaha sidoo kale waa wax aad u fiican, sidaa darteed isticmaalka maaskaro la tuuro asxaabta ayaa waliba si toos ah u dareemi kara qaabka wax soo saarka ee iftiinka iyo jilicsan, wejiga wajiga ma yeelan doonaan dareen xoqan, dareen jilicsan u oggolow macaamiisha badankood diyaar u ah inay sii wataan xirtaan maaskaro noocan oo kale ah. Dhanka kale, maqaarka wajiga si fiican ayuu u ilaaliyaa markuu xiranayo maaskaro la isticmaali karo.
2. Hawo wanaagsan
Maaskaro la tuuri karo maxaa yeelay adeegsiga agab leh awood badan, sidaa darteed soosaarka saameynta xirashada ayaa waliba leh awood fiican. Qaar ka mid ah maaskarada cufan ee cufan waxay saameyn ku yeelan doontaa neefsashada dadka illaa xad, ka dib markii ay xirtaan dadka neefsashada badanaa way adag tahay. Maaddada maaskaro la tuuri karo waa mid habboon, dadku ma yeelan doonaan dhibaatooyin neefsashada ka dib marka ay xirtaan ifafaale, waxaa jira adeegsiga dareenka oo sifiican loo isticmaalo.